Fanaanka Rap-ka ee Akon ayaa dalka Senegal ka aasaasaya magaalada Akon City oo laga… – Hagaag.com
Fanaanka Rap-ka ee Akon ayaa dalka Senegal ka aasaasaya magaalada Akon City oo laga…
Posted on 23 Agoosto 2020 by Admin in Technology // 0 Comments
Fanaanka Rap-ka ee Akon ayaa wuxuu aasaasaya bilowga magaalo la yiraahdo Akon City, oo ah “magaalo mustaqbal leh” oo ku taal Senegal oo isticmaali doonta lacagaha digitaalka ah, ka dib markii uu maalgashadeyaasha ka helay $4 bilyan.
Magaalada ayaa si buuxda u adeegsan doonta lacagta digital-ka ah, Akoin, iyo qorshayaal lagu abuurayo Jardiinooyin, Jaamacado, Iskuulo, garoomo lagu ciyaaro, hoteello iyo xarumo kale oo dowladeed. Waxey Akoin noqon doontaa lacagta loogu talagay dadka ku nool Magaaladaasi ku taalo Senegal oo laga dhisayo dhul ay ku deeqday dowlada.
Akoin waa mid ka mid ah qiyaastii 1,600 cryptocurrencies ee ku baahsan adduunka oo leh xaddiga suuqa oo ka badan $267 bilyan, sida lagu sheegay xogta ka soo baxda Coin Market Cap.
Lacagta dhijitaalka ah ayaa la shaaciyey 2018, sida uu xusay website-ka Culture Banx, waxaa la sheegay in heesaaga iyo kooxdiisu ay qorsheynayaan inay ka dhisaan magaalo iyagoo kaashanaya soo jeedimaha dhalinyarada ganacsatada ah islamarkaana lagu taageerayo dhismaha nidaam aan ka caaganeyn bey’ada ee Akoin.
Waxaa xusid mudan in in kabadan 60% dadka ku nool qaarada Afrika ay da’doodu ka yartahay 25 sano, mana isticmaalaan bankiyada, isla markaana ay si aad ah ugu tiirsan yihiin taleefannada gacanta si ay wax walba ugu qabsadaan, taas oo macnaheedu tahay, sida ay qabaan falanqeeyayaasha, in fikirka Akoin uu runtii ku faafi karo qaaradda oo dhan, maadaama 6 ka mid ah 10ka dhaqaala ee ugu dhaqsaha koriinka badan ay ku yaalaan Afrika.
Sanadka 2034, Afrika waxaa lafilayaa inay lahaato dadka ugu badan ee da’da shaqeeya ah ee adduunka, kaas oo gaari doona 1.1 bilyan sida lagu sheegay Madasha Dhaqaalaha Adduunka, waxaa sidoo kale lagu wadaa in dadka wax iibsada ay ku bixiyaan ama qarash-gareeyaan $2 tiriliyan marka la gaaro 2025.
Dowlado badan oo Afrikaan ah ayaa shaki ka muujiyay jiritaanka ma run ahaanshaha lacagaha loo yaqaan ‘cryptocurrencies’, bangiga keydka ee dalka Zimbabwe ayaa ka mamnuucay bangiyada inay xataa ka baaraandegaan bixinta ama isticmaalka lacagaha dijitaalka ah ee waddanka.
Qeybta Adeegyada Dakhliga ee Koonfur Afrika ayaa dhowaan daabacday hagitaan ku saabsan sida loo cashuuro lacagaha loo yaqaan ‘cryptocurrencies’, taasoo dhalisay muran ku saabsan kala-saaritaankooda, iyo Bangiga Dhexe ee Kenya oo ka gaabiyey soo saarista qawaaniin ku saabsan lacagaha Cryptocurrencies.
In kasta oo ay jiraan dhammaan shakigaas la xidhiidha walaaca ay qabaan dalalkan ee ku saabsan khatarta lacagaha digital-ka ah iyo suurtagalnimada in dadku lacagtooda ku waayaan ama ku khasaaraan waddamadan, is-dhex-galka tikniyoolajiyadda ” block chain ” ee lagu dhisayo magaalooyinka ayaa sannadihii ugu dambeeyay kordhay.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in inkasta oo midkoodna aaney ku guuleysan mashruucyadan illaa hadda, haddana waqtiga ayaa sheegi doona bal in cryptocurrencies sida Akoin ay u xasilin doonto dhaqaalaha Afrika ama ay u oggolaan doonto macaamiisha doonaya inay ku sii hayaan lacagahooda nidaam dhaqameedkii hore.
Akon wuxuu ku biirayaa dad caan ah oo ku lug leh cryptocurrencies, waxaa suuragal ah in wejiga koowaad ee Akon City inuu dhammaado dhammaadka 2023.
Waxaa ka mid noqon doona dhismo waddooyin, dhismaha Isbitaalka Hamptons, Xarunta ganacsiga ee Hamptons Mall, guryo, hoteello, saldhig boolis, iskuullo iyo warshad soo saarta tamarta qorraxda, wejiga labaadna wuxuu fidi doonaa sanadka 2024 illaa 2029.